ဒေါက်တာ Ellen Kooijman သည် LEGO နှင့်သိပ္ပံပညာကိုဆွေးနွေးသည်
09 / 06 / 2017 ဂရေဟမ် 1199 Views စာ0မှတ်ချက် 21110 သုတေသနအင်စတီကျု, 21302 Big Bang သီအိုရီ, Ideas, Lego, Lego Ideas
၏ပန်ကာဒီဇိုင်နာ Lego Ideas set 21110 Research Institute, ဒေါက်တာ Ellen Kooijman, သိချင်စိတ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်ကယုံကြည်သည်။
သူမသည်စဉ်းစား Lego ဒီဥပမာကိုထုတ်ပြန်ပြီးအင်တာဗျူးတဲ့အခါအဲဒီအကြောင်းကိုပြောပါ ဆီလီကွန်သမ္မတနိုင်ငံ.
“ ကျွန်တော်ဟာပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ Lego မှ ငါ့ဘ ၀ တစ်သက်လုံးလုံး” ဟုဆွီဒင်နိုင်ငံမှ Skype မှ Kooijman ကဆွီဒင်နိုင်ငံမှသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တွင်သုတေသနပညာရှင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ "ငါကြောင်းအစုံသတိထားမိခဲ့သည် Lego မှ သူတို့ကယောက်ျားလေးသေးငယ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူတို့တွေဟာအမျိုးသမီးအသေးစားအလုံအလောက်မလုပ်ကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ထိုအချိန်က Koojiman သည်အမျိုးသမီးအသေးစားပုံများမရှိခြင်းကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Lego Ideas သူမ၏အယူအဆကိုစတင်ရန်ပလက်ဖောင်း။
သူမထိုဗီဒီယိုကွန်ဖရခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ Kooijman '' flabbergasted '' ခဲ့သည် Lego မှ အလေးအနက်ထားသုတေသနအင်စတီကျုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်မအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့အခါငါအရမ်းမတုံ့ပြန်ဘူး” ဟုသူမကဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါငါနံရံပေါ်ကနေခုန်ထွက်လာတယ်!”
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂၁၁၁၀ သုတေသနအင်စတီကျုသာမက ၂၁၃၀၂ Big Bang သီအိုရီသာမက Kooijman သည်ပထဝီအနေအထားအရသိပ္ပံပညာတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
“ မင်းဟာအရာရာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘယ်သူမှအရင်ကမသိဖူးတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ "သင်၌ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည့်ဗဟုသုတကိုသင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်မှုများစွာရရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။ "
နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံမှုတ်သွင်း Lego Ideas အစုံမကြာသေးမီကဖြန့်ချိသည် 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို.
← LEGO အကြီးမားဆုံးပန်းချီကားသည်မလေးရှားတွင်ပြသခဲ့သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Swan Lake →